संवैधानिक जटिलताका कारण सरकारले अस्थाई राजधानी तोकेको हो । स्थायी केन्द्र निर्धारण गर्ने काम प्रदेश संसदको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । प्रदेश संसद र सरकारलाई पनि विवेक प्रयोग गर्न दिउँ न । आन्दोलन गरेरै राजधानी खोज्ने हो भने चुनावमा भोट हाल्नुको के अर्थ ?
वर्षेनी करोडौं रकम फ्रिज भएर जान्छ । तर बर्खामा बाढीपहिरो र हिउँदमा शितलहरले सयौंको ज्यान लिन्छ । बेलाबेलामा राहतको घोषणा गरेर नागरिकको आँखामा छारो हाल्नुको साटो विपत पीडितका लागि सरकारले एउटा स्थायी कोष खडा गर्न किन नसकेको होला ।
सरकारले जहिले घरेलु मदिरा नष्ट गरेको सुनिन्छ । तर विदेशी मदिराले देश खाइसकेको छ । जुन सरकारले कहिल्यै नष्ट गर्दैन् । सरकार गरिव नागरिकले जिविकोपार्जनका लागि उत्पादन गरेको मदिरा भन्दा शहर बजारका ठुल्ठुला रेष्टुरेन्टमा हुने मदिरा व्यापार बन्द गरे हुन्थ्यो ।
चुनाव सकिएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि पुरानाले सरकार नछाड्ने । फेरि स्पष्ट बहुमत ल्याउनेहरुले सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने राष्ट्रमा कहिले गुड्ला रेल ?
आज भोलि समय समयमा बम बिस्फोटको समाचार सुन्न,हेर्न अनि पढ्न पाईन्छ । तर यो किन र कस्ले कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कसैको चासोको विषय बन्न सकेको छैन । सरकारले यस्ता घटनाको कारण पत्ता नलगाए असुरक्षाको डरले मतदाता मतदान स्थलमा नआउन पनि सक्छन् ।
​जुद्ध बहादुर चौधरी
मरेका र विदेश गएका मतदाताको नाममा मत हाल्नु बुथ कब्जा गर्नु सरह हो । यस्तो गलत प्रक्रियाले मतदान हुने हो भने राम्रो मान्छे कसरी छानिएलान् ? धादिङको यस घटनाबाट पाठ सिकेर अब दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनमा यस्ता कार्य दोहोरिन नदिन बेलैमा सचेतता अपनाउनु पर्छ ।
सरकार नै गैरजिम्मेवार भएर निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्छ भने अरु दल र दलका उम्मेदवारले झन किन पालना गर्थे र ? निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गर्नुको साटो थाहा नपाए जस्तै गरी बस्छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निजीकरणका नाममा ३८ वटा उद्योग धराशायी भएको भनेको सुन्दा प्रश्न गर्न मन लाग्यो, सरकारी उद्योग निजीकरण भएका बेला तपाईहरुले विरोध किन गर्नु भएन ? तपाईहरु पनि पटक पटक सरकारमा जानुभयो । निजीकरण भएका उद्योगलाई किन उकास्नु भएन ? एक अर्कालाई आरोप लाउने भन्दा आफुले कति काम गरे भनेर सोच्न जरुरी छ नेता ज्यू ।
भोट हालेपछि गाउँको विकास हुन्छ भन्नु मतदाताको अपेक्षा हुन्छ र आफूले मतदान गरेको व्यक्ति गाउँ टोल समाज र देशको विकासमा अग्रसर होस भन्ने । तर के गर्ने चुनाव अगाडि मतदातालाई नजिकैको सम्झनेहरू जितेर गैसकेपछी कहाँ के गर्छन कसैलाई पत्तो हुदैन ।
कृष्ण प्रसाद भुषाल
अहिले सम्म सरकारले चुनावका लागि भनेर झण्डै २० अर्ब खर्च गरिसकेको छ । यति ठुलो मात्रामा हुने खर्चलाई रोक्न विद्युतीय वा अनलाईनबाट चुनाव गराए हुदैन् र ? ता की यति ठुलो बजेटलाई विदेश जाने ४० लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने काममा खर्च गर्न सकियोस् ।
दलाई लामाले बुद्ध भारतमा जन्मेको अभिव्यक्तिले ३ करोड नेपालीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । लामाको अभिव्यक्ति सच्याउन नेपाल सरकारले नै औपचारिक रुपमा अपिल गर्न आवश्यक छ ।
हिमालदेखि तराईसम्म चुनाव लागेको छ । चुनाव पछि विकास होस् । युवालाई स्वदेशमै रोजगारको अवसर मिलोस् ।
उम्मेदवार छान्ने विषयमा विवाद हुँदा सिरहा कांग्रेस कार्यकर्ताबिच कुटाकुट हुँदा १० जना घाइते भएको खबरले कांग्रेस गुटैगुट भएको पार्टी हो भन्ने पुष्टि गर्छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गुट, रामचन्द्र पौडेल पक्षको गुट, भ्रष्टाचार गरेर जेल बसिसकेका खुमबहादुर खड्काको गुट । हिजो अस्ति गुट मात्रै भन्थे आज त गुटको झगडा नै भएछ ।
निर्वाचनमा सत्ता दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पछिल्लो पटक भरतपुर १९ को सन्दर्भमा विकसित घटनाक्रमले प्रष्ट पारेको छ ।
श्रीमान श्रीमतीबिचको झगडामा चासो देखाउने मानव अधिकारवादी संस्था ११ वर्षे बालिका बलात्कृत भएर गर्भवती हुँदा समाजबाट बहिस्कृत भइ घरबाट निकालिँदा पनि किन बेखबर छ ? त्यसैले यस्ता संस्थाले तत्काल पहल गरुन् ।
तेह्रथुमका स्थानीय तहमा उपप्रमुखमा सबै महिला निर्वाचित भएको खबर सुन्दा खुसी लाग्यो । अवसर पाए ,इच्छाशक्ति हुने सबैले गर्न सक्छ्न् । बहाना केवल उसलाई हो जोसँग इच्छा शक्ति नै छैन ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको लापरबाहीका कारण थ्री स्टार क्लबले एएफसी प्ले अफ खेल्न नपाएपछि एन्फाले डेढ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति त दियाे तर ‍एन्फाको कमजोरीले नेपाली फुटबललाई पारेको असर पैसामा नाप्न सकिँदैन ।
देशको ४० औं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सफल कार्यकालको शुभकामना । पालैपालो कुर्सी साट्ने हैन अब देशलाई उज्वल भविष्यतर्फ लैजाने सोच र प्रेरणा मिलोस् ।
​विक्रम अर्पण मगर
पार्टीको लाइन भन्दा पनि पक्ष विपक्षी नभनी नागरिकको लाइन अनुसार काम गर्नुस् । यसैमा तपाईं अनि गाउँ र नगरको भविष्य उज्यालो हुनेछ ।
काठमाडौँ र मधेश भन्दा पहिला हामी सबै नेपाली हौ । राम्रो काम गर्ने पूर्वको मान्छेलाई पश्चिमले साथ र सहयोग दिन्छ । हिमालले तराईकोलाई सहयोग र समर्थन दिन्छ । यो तपाईको प्रयासले समाजमा नयाँं उत्साह र नकारात्मकको राजनीतिकलाई केही सम्म धुने काम गरेको छ ।